Matongerwo eNyika, 01 Nyamavhuvhu 2017
Chipiri 1 Nyamavhuvhu 2017
ZEC Yokurudzirwa Kuita Zvinhu Zvakajeka Munyaya Dzinobata Sarudzo
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kuna sachigaro weZEC, Amai Rita Makarau, kuti tinzwe divi rekomisheni yavo pamashoko ari kutaurwa naAmai Chipfunde Vava.
VaMugabe Voshorwa Zvichitevera Komekedzo Kuna VaChinamasa Kuti Vadzose Vechidiki paBasa
Hukama hweZimbabwe nemasangano anokweretesa mari anoti reInternational Monetary Fund neWorld Bank hunenge hucharamba hwakaita manyama amire nerongo mushure nekunge mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vabuda pachena kuti havana hurongwa hwekudzikisa huwandu hwevashandi vehurumende senzira yekugadzirisa nyaya yezvehupfumi.
VaTsvangirai Votungamira MDC Alliance Musarudzo Gore Rinouya?
Gwaro iri riri kutarisirwa kusainwa kumusangano mukuru unonzi uchaitwa nemusi weMugovera kunhandare yeZimbabwe Grounds mumusha weHighfields.
MDC-T Inoti Yotarisira Kudzorwa kweMidziyo Yakabvutwa neChikonzi
Munyori mukuru weMDC-T, VaDouglas Mwonzora vanoti sebato havana kumbobvira vakaona magwaro aibva kumagweta aMuzvare Dura ane chekuita nenyaya iyi.
Varwi veHondo yeRusununguko Vanoti Amai Grace Mugabe Havafe Vakatonga Nyika
Sangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association kana kuti ZNLWVA nemusi weChishanu rakaita musangano nevatori venhau rikazivisa kuti harisi kuzotenda kuti hutungamiri webato reZanu-PF huiite kunge humambo hwekuti mhuri imwe chete yemutungamiri wenyika VaRobert Mugabe ndiyo inoramba ichitonga.
Zvitoro Zvovharwa neMugovera muChinhoyi Kuitira Musangano waVaMugabe
Mumwe mukuru wevechidiki muMashonaland West, VaTapiwa Chitate, vakurudzira vanhu kuti vasashande neMugovera, uye vemabhizinesi kuti vavhare.
Vakawanda Votyira Kudeuka kweRopa Munyika
Vanhu vakawanda vanoti vave kutyira kuti munyika munogona kudeuka ropa kana mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vakasagadzirisa nyaya yekunetsana kunotyisa kuri kuitika mubato reZanu-PF.
Mukuru wesangano re Election Resource Center, VaTawanda Chimhini, vanoti vanhu vari muparamende havasi kuita zvido zvevanhu vakavavhotera nekuti bumbiri rakabva muvanhu .